Apple Cider Vinegar | Mega Planet Co., Ltd
*% Daily Values(DV) are based on 2,000 calorie diet.
pH = 3.2 - 3.5
Concentration/Strength = 50 grain
Serving Size : 1 Tbsp (15mL)
Calories : 0, Calories from Fat : 0
"Apple Cider Vinegar is the icing on the cake. I had always heard about Apple Cider Vinegar... everyone in the world should be drinking this onadaily basis!" - Dr. Steven Gibb
ထောက်ခံချက်ရ Bragg Organic Apple Cider Vinegar ကို အရသာရှိသည့် ကျန်းမာသည့် အော်ဂင်းနစ်စနစ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးသည့်ပန်းသီးများမှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး USDA လမ်းညွှန်မှုများအရ ထုတ်လုပ် ပုလင်းထည့်သွင်းထုပ်ပိုး ထားသည်။ ယင်းကို အော်ဂင်းနစ်ဆိုင်ရာ အတည်ပြုပေးသူများနှင့် Oregeon Tilthတို့မှ အတည်ပြုပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး Kosher Bragg Organic Raw Apple Cider Vinegar သည် သင်မှနှစ်ခြိုက်စေမည့် သဘာဝအနံ့အရ သာများပါဝင်ပြီး GMO ထောက်ခံချက်မပါဝင်ပေ။
ယင်းကို အသုတ်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် အစားအစာအများစုတွင် အပြည့်အဝရောစပ်နိုင် သည့်အပြင် ပေါက်ပေါက်ဆုပ်များပေါ်တွင်လည်း ဖြူးစမ်းနိုင်ပေမည်။
Apple Cidar Vinegar အား သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်မြင့်မားစွာ ရည်ညွှန်းသုံးစွဲခဲ့သည်။ 400B.C အတွင်း ဆေးပညာ၏ ဖခင်ကြီးဖြစ်သည့် the Great Hippocrates သည် ယင်းအား သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သန့်စင်မှုအတွင်း အသုံးပြုခဲ့သည်။
ငယ်ရွယ်၍ ကျန်းမာသည့် ခန္ဒာကိုယ်ကိုရရှိစေသည်
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမှ ရရှိလာသည့် ကြွက်သားနာကျင်မှုများကို ကုသပေးသည်
Enzymes နှင့် potassium ပံ့ပိုးပေးသည်
အစာချေစနစ်နှင့် pH မျှတမှုအား မြင့်တင်ပေးသည်
ခန္ဒာကိုယ်အတွင်း အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်
စုစုပေါင်းအဆီ0g 0%
နေ့စဉ်အာဟာရတန်ဖိုး % (DV) အား 2.000 caione diet အပေါ်အခြေခံသည်။
ပျော်ဝင်မှု/စွမ်းရည် = 50 grain
ပါဝင်မှုများ : Certified Bragg Organic Raw Apple Cider Vinegar is unfiltered, unheated, unpasteurized and 5% acidity. Contains the amazing Mother of Vinegar which occurs naturally as strand-like enzymes of connected protein molecules.
Apple Cider Vinegar အား ကိတ်မုန့်အပေါ်တွင် ခရင်မ်အဖြစ်စမ်းကြသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေက Apple Cider Vinegar ကိုအခြေခံတဲ့ သောက် သုံးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် လို့ (Dr-Steven Gibb)ကမိန့်ဆိုတာကြားဖူးတယ်။